w:kab:Dzayer Algeria (Algeria) / Arabic: الجزائر al-Jazāir, Carabi Algerian Carabi: الدزاير al-dzāyīr; Luqadaha Berber: ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ; Faransiis: Algerian), si rasmi ah Jamhuuriyadda Dadweynaha ee Aljeeriya, waa wadan madaxbannaan oo dhaca qaarada Africa, xeebta badda Mediterraneanka. Caasimadda iyo magaalada ugu dadka badan waa Algiers, oo ku taal waqooyiga dalka xeebta Mediterraneanka. Algeria waa wadanka tobnaad ee ugu weyn dunida, iyo man koowaad ee ugu weyn Afrika ayaa tan iyo markii koonfurta Suudaan ay ka madax banaaneyd Sudan 2011-kii. Aljeriya ayaa xuddun u ah Waqooyi-bari ee Tunisia, dhinaca bariga ee Liibiya, dhinaca Galbeedka ee Morocco, dhinaca koonfur galbeed ee u dhexeeya Galbeedka Saharan, Mauritania, iyo Mali, ilaa koonfur bari ee Niger, iyo waqooyiga badda Mediterranean. Wadanku waa Jamhuuriyad Seddexaad ah oo ka kooban 48 gobol iyo 1.541 wada-dhaqan (gobollo). Abdelaziz Bouteflika wuxuu ahaa madaxweynaha tan iyo 1999kii.
Aljeeriya waxay ogtahay in badan oo ka mid ah boqortooyadii iyo nasteexooyinkii waagii hore ahaa, kuwaas oo ay ka mid yihiin Nimidiyiin, Phoenicians, Carthaginians, Romans, Umayyads, Abbasids, Idrisid, Aghlabid, Rugid, Fatimids, Zirid, Hammadids, Almoravids, Almohads, Boqortooyada. Berbers waa dadka asaliga ah ee Algeria.
Algeria, oo dhaqaalaheedu ku tiirsan yahay batroolka, wuxuu xubin ka ahaa OPEC tan iyo 1969-kii. Waxyaabaha saliidda ee saliida ah waxay u taagan yihiin qiyaastii 1.1 milyan oo foosto / maalin, laakiin sidoo kale waa soo saaraha gaasiga ah iyo dhoofiyaha, oo leh xiriiro muhiim ah oo Europe ah. Hydrocarbons ayaa muddo dheer laf-dhabar u ah dhaqaalaha, taas oo qiyaastii 60% dakhliga miisaaniyadda, 30% ee miisaaniyadda, iyo in ka badan 95% dakhliga dhoofinta. Aljeeriya waxay leedahay kaydka 10aad ee ugu weyn ee gaaska dabiiciga ah ee adduunka ah, waana geedka lixaad ee ugu dhoofiya gaasta. Maamulka Warfaafinta Mareykanka ayaa soo wariyay in 2005, Algeria ay ku leedahay 160 trillion cubic feet (4.5 × 1012 m3) ee kaydka dabiiciga ah ee dabiiciga ah. Waxa kale oo uu ku jiraa 16th ee kaydka shidaalka.
Waddnamha deggan algeriaEdit
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Aljeeriya&oldid=219846"
Last edited on 16 Oktoobar 2021, at 08:16
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 16 Oktoobar 2021, marka ee eheed 08:16.